Carewell Vਜ਼ਨ, सुनुवाई, LASIK लाभ | Carewell SEIU 503
तपाईंको जीवनमा स्पष्टता थप्नुहोस्।
Carewell SEIU 50० 50 दृष्टि + श्रवण लाभले कुनै मासिक प्रीमियमको लागि दर्शन र श्रवण सेवाहरूमा पहुँच प्रदान गर्दछ।
भिजन बेनिफिटहरू Ameritas द्वारा VSP च्वाइस नेटवर्क मार्फत बीमा गरिएको छ। वार्षिक परीक्षाको लागि कुनै शुल्क छैन यदि तपाईं ईन्-नेटवर्क प्रदायक प्रयोग गर्नुहुन्छ। यदि एक प्रदायकले Ameritas प्रत्यक्ष रूपमा बिल गर्दैन भने, तपाईंले अगाडि तिर्नु पर्छ र प्रतिपूर्तिको लागि बुझाउनु पर्छ। अधिक जानकारीको लागि लाभ सारांश समीक्षा गर्नुहोस्।
Ameritas SoundCare मार्फत सुनुवाई सुविधाहरू उपलब्ध छन्। साउन्डकेयर नेटवर्कमा बाँधिएको छैन। तपाईं कुनै पनि प्रदायकमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईं एक विस्तृत सुनवाई परीक्षा को लागी 12-महिना अवधि प्रति $75 भत्ता को लागी योग्य हुनुहुन्छ। तपाईंले सम्भावित सेवाहरूको लागि अगाडि भुक्तान गर्नुपर्नेछ र प्रतिपूर्तिको लागि सबमिट गर्न आवश्यक हुनेछ। अधिक जानकारीको लागि लाभ सारांश समीक्षा गर्नुहोस्।
LASIK सुविधाहरू Ameritas LASIK Advantage मार्फत उपलब्ध छन्। LASIK लाभ नेटवर्कमा बाँधिएको छैन। तपाईं कुनै पनि प्रदायकमा जान सक्नुहुन्छ। अधिकतम आजीवन लाभ तपाईं प्रति आँखा प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ $500 हो। तपाईंले सम्भावित सेवाहरूको लागि अग्रिम भुक्तान गर्न आवश्यक हुनेछ र प्रतिपूर्तिको लागि सबमिट गर्नुहोस्। अधिक जानकारीको लागि लाभ सारांश समीक्षा गर्नुहोस्।
केयरवेल SEIU 3०3 भिजन, सुनुवाई, र LASIK लाभ योग्य होमकेयर श्रमिकहरू र व्यक्तिगत समर्थन कामदारहरूको लागि प्रीमियम-रहित छ - तपाइँ भुक्तान गर्न को लागी मासिक बिल छैन।
एक पटक तपाईं योग्य भएपछि , तपाईं Ameritas योजना को माध्यम बाट कवरेज हुनेछ।
तपाईं आफ्नो सुविधा + सुनुवाई बेनिफिटहरू सम्बन्धित कुनै पनि खर्चको लागि भुक्तान गर्न बेनिफिट सुविधा कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
दृष्टि + श्रवण फाइदाको लागि तपाईंको योग्यता जाँच गर्नुहोस्
तपाईंको नाम, लि ,्ग, सामाजिक सुरक्षा नम्बर, जन्ममिति र हालको ठेगाना फाइलमा प्रशासनिक कार्यालयको साथ राख्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् तपाईको जानकारी अपडेट गर्नका लागि.
एक पटक तपाईं केयरवेल SEIU 3०3 दृष्टि + श्रवण बेनिफिटहरूको लागि योग्य भएपछि , तपाईंलाई दर्शन, सुनुवाई, र LASIK कार्डहरू एक विशाल, सादा सेता खामफाँटमा पठाइनेछ ।
दर्शन: VSP विकल्प नेटवर्क
सुनुवाइ: नेटवर्कमा बाँधिएको छैन
LASIK: नेटवर्कमा बाँधिएको छैन
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको दर्शन प्रदायक सेवा खोज्नु अघि नेटवर्कमा छ र सावधानीपूर्वक समीक्षाको लागि लाभ सारांश समीक्षा गर्दछ सम्भावित आउट-अफ-पकेट खर्चहरू जस्तै कापीहरू र सह-बीमाहरूको बारेमा जानकारीको लागि। केयरवेल एसआईयू 50०3 ले तपाईंलाई अतिरिक्त लागतहरूको लागि भुक्तान गर्दैन र तपाईं लाभ सुविधा कार्डलाई दृष्टि वा श्रवण खर्चको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, त्यसैले तपाईंको प्रदायकसँग प्रक्रियाहरूका बारे जाँच गर्नुहोस् जुन पूर्ण रूपमा कभर गरिएको छैन।
VSP छनोट नेटवर्कमा प्रदायक खोज्नुहोस् VSP वेबसाइटको vsp.com/eye-doctor मा गएर वा १-8००-877775 calling by195 कल गरेर।
तपाईं श्रवण सेवाहरूको लागि कुनै पनि प्रदायक वा सुविधा जान सक्नुहुन्छ! श्रवण लाभमा कुनै नेटवर्क जोडिएको छैन। तपाईंले सम्भवतः अगाडि भुक्तान गर्न आवश्यक छ र प्रतिपूर्तिको लागि सबमिट गर्न आवश्यक छ।
तपाई LASIK सेवाहरूको लागि कुनै पनि प्रदायक वा सुविधामा जान सक्नुहुन्छ! त्यहाँ कुनै नेटवर्क LASIK लाभ संग जोडिएको छैन। तपाईंले सम्भवतः अगाडि भुक्तान गर्नुपर्नेछ र प्रतिपूर्तिको लागि सबमिट गर्न आवश्यक हुनेछ।
तपाईंले पुन: आवेदन दिन आवश्यक पर्दैन - जबसम्म तपाईं योग्य कामका घण्टा (वा शून्य घण्टा रिपोर्ट नगरी ) लगातार दुई महिनासम्म जानु हुँदैन तपाईं दन्त, दृष्टि + सुनुवाई, र कर्मचारी सहायता कार्यक्रम बेनिफिटहरूको लागि योग्य रहनुहुनेछ। तपाईं प्रत्येक वर्ष नयाँ कार्डहरू प्राप्त गर्नुहुने छैन ।
यदि तपाइँ एक योग्य कार्य घण्टा (वा शून्य घण्टा रिपोर्ट गर्ने ) को साथ प two्क्तिमा दुई पात्रो महिना जानुभयो भने , एक क्यालेन्डर महिनाको अनुग्रह अवधि पछि तपाईं दन्त, दृष्टि + सुनुवाई, र कर्मचारी सहायता कार्यक्रम लाभहरूको लागि योग्य हुनुहुने छैन जबसम्म तपाईं ' तपाइँको योग्यता पुनः प्राप्त भयो।
यदि तपाईंले योग्यता हराउनुभयो भने, तपाईं कोब्रा निरन्तरता कभरेजमा भर्ना हुन सक्नुहुन्छ। अधिक जानकारीको लागि बेनिफिट प्रशासनिक कार्यालयलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ VSP च्वाइस नेटवर्कको बाहिर एक प्रदायकमा जानुहुन्छ भने तपाईले अगाडि तिर्नु पर्छ र प्रतिपूर्तिको लागि बुझाउनु पर्छ। कृपया नेटवर्क सारांश प्रदायकमा जाँदा फाइदा स्तरहरू हेर्न सावधानीपूर्वक सावधानीपूर्वक समीक्षा गर्नुहोस्।
VSP सदस्य प्रतिपूर्ति फारम (पीडीएफ)
तपाईंले सुनुवाई सेवाहरूको लागि अगाडि भुक्तान गर्नुपर्नेछ र प्रतिपूर्तिको लागि सबमिट गर्न आवश्यक हुनेछ।
Ameritas सुनवाई प्रतिपूर्ति दावी फारम (पीडीएफ)
तपाईंले LASIK सेवाहरूको लागि अगाडि भुक्तान गर्नुपर्नेछ र प्रतिपूर्तिको लागि सबमिट गर्न आवश्यक हुनेछ। नोट गर्नुहोस् कि यो फारम केवल LASIK सेवाहरूको लागि हो, अन्य दृष्टि सेवाहरू होईन जस्तै वार्षिक आँखा परीक्षण, लेन्स, वा फ्रेमहरू।
Amertias Vision (LASIK मात्र) प्रतिपूर्ति दावी फारम (PDF)
Ameritas योजना सिंहावलोकन (पीडीएफ)
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् सबै दर्शन + श्रवण स्रोतहरू
दृष्टि + सुनुवाई लाभका लागि योग्यताको बारेमा प्रश्नहरू
तपाईंले आफ्नो दर्शन, LASIK, वा हियरि hearing कार्ड प्राप्त गर्नुभएन
Ameritas लाई सम्पर्क गर्नका कारणहरू:
तपाईंको नजिक एक नेत्र डाक्टर पत्ता लगाउनुहोस्
सेवाहरू / सामग्रीको बारेमा प्रश्नहरू यो योजना अन्तर्गत आयो
तपाईंलाई नयाँ कार्ड चाहिन्छ
केयरवेल दृष्टि + सुनुवाई लाभको बारेमा सामान्य प्रश्नहरू पढ्नुहोस्। अधिक जानकारी को लागी प्राय: सोधिने प्रश्न पृष्ठ हेर्नुहोस्।